Translations by jsmith201012 in “Burmese (my) translation of deb...” : Burmese (my) : Template “debian-installer” : Zesty (17.04) : Translations : debian-installer package : Ubuntu
Translations by jsmith201012
Translations by jsmith201012 in “Burm...
jsmith201012 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.
Ubuntu ကို ကွန်ပျူတာတွင် ထည်.သွင်းရန် ပင်မစာမျက်နှာ
You can select the lowest priority of question you want to see: - 'critical' is for items that will probably break the system without user intervention. - 'high' is for items that don't have reasonable defaults. - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults. - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in the vast majority of cases.
သင်ကြည်.လိုသော အရေးပါမှု အနည်းဆုံး မေးခွန်းများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ - 'critical' စနစ်ကို ပျက်ဆီးစေနိုင်သော အရာများ အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲသူ စွက်ဖက်မှု မပါပဲ။ - 'high' သင်.လျော်သော သတ်မှတ်မှုများ မပါ၀င်သော အရာများ - 'medium' သင်.လျော်သော သတ်မှတ်မှုများ ပါ၀င်သော ပုံမှန် အရာများ - 'low' သတ်မှတ်မှုများတွင် ထည်.သွင်းသော အရေးမကြီးသော အရာများ အခြေအနေ အများစု
ဥပမာအားဖြင်.၊ မေးခွန်း၏ အရေးပါမှုမှာ 'medium' ဖြစ်ပြီး၊ သင်​ရွေးချယ်သော အရေးပါမှုမှာ 'high' သို.မဟုတ် 'critical' ဖြစ်ခဲ.လျင် သင်သည် ဤမေးခွန်းကို မြင်ရမည် မဟုတ်ပါ။
ဖမ်းထားသော ပုံရိပ်ကို %s အနေဖြင်. သိမ်းရန်
!! အမှားရှိပါသည်: %s
ထည်.သွင်းခြင်းကို လုပ်ဆောင်သော ဆော.လ်ဝဲလ်မှ ထွက်ပါမည်။
အကယ်၍ ထည်.သွင်းခြင်း မပြီးသေးပါက၊ သင်.စနစ်သည် သုံးလို. မရသည်. အခြေအနေတွင် ဖြစ်နေလိမ်.မည်။
Shell တခုကို ဖော်ပြရန် terminal plugin ကို ဤ debian-installer အဆင်.အတွက် လိုအပ်ပါသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင်.၊ ယခု ဤ plugin ရှိမနေပါ။
Kernel modules များ မပါဘဲ ထည်.သွင်းခြင်းကို ဆက်လုပ်မလား။
ဘာသာစကား ရွေးချယ်ပါ/Choose language
အခြားဘာသာစကားတခု ရွေးချယ်ရန် ဤထည်.သွင်းခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းပြစ်ပြီး အင်စတော်လာ software ကို ပြန်ပြီး အစမှ စတင်ရန် လိုအပ်သည်။
အင်စတော်လာ ဆော.လ်ဝဲကို ရွေးချယ်ထားသော ဘာသာစကားဖြင်. ဘာသာပြန်ခြင်း မပြီးဆုံးပါ။
အင်စတော်လာ ဆော.လ်ဝဲကို ရွေးချယ်ထားသော ဘာသာစကားတခုထဲသို. ဘာသာပြန်ခြင်း မပြီးသေးပါ။
အင်စတော်လာ ဆော.လ်ဝဲကို ရွေးချယ်ထားသော ဘာသာစကားဖြင်. ဘာသာပြန်ခြင်း မပြည်.စုံပါ။
ထို.အတွက်ကြောင်. အချို. စာသားများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင်. ပြသဖို. အခွင်.အလမ်းများသွားသည်။